Git Sangit News » शारी’रिक सम्प’र्क गर्दा स्त’न मिच्ने कि नमिच्ने ? जानिराखौ,
शारी’रिक सम्प’र्क गर्दा स्त’न मिच्ने कि नमिच्ने ? जानिराखौ,
शारी’रिक स’म्पर्क गर्ने क्रमलाई आनन्द’मय बनाउन मानिसहरू अनेक उपाय सोच्छन् । शा’रीरिक सम्प’र्कका क्रममा पुरुष साथीले महिलाको स्त’न मिच्ने समेत गर्छन् । शारी’रिक सम्प’र्कअघि शारी’रिक उत्ते’जना बढाउन स्त’न मिच्ने गरेपनि शा’रीरिक स’म्पर्कका क्रममा स्त’न मिच्नु ठीक हो कि होइन भन्ने स्पष्ट जान’कारी नहुन सक्छ ।
यौ’न पार्ट’नरको स्त’न मिचेर आन’न्द उठाउने पुरु’षहरूको लागि एउटा अध्य’यनको निष्क’र्ष खुशी दिने खालको छ । युसी बर्कली र लरेन्स बर्कली राष्ट्रिय प्रयोग’शालाले स्त’न मिच्दा वा नि’चोर्दा क्या’सनको से’ल्स दू्रत’गतिमा बढ्न नसक्ने अध्यय’नले बताएको छ ।
भारत्तोलनले मांश’पेसी फूलाउने र हड्डी बलियो पारेजस्तै स्त’न निचो’र्दा स्त’नको साइज बढाउने र क्यान्स’र रोक’थाम गर्ने आन्ति’रिक श’क्ति थपिने अध्ययनले देखाएको छ । शारी’रिकरुपमा सँगसँगै स्त’न मिच्दा महिला साथीलाई पनि आनन्द आउने भएकाले स्तन मि’च्नु उत्तम नै हुने अध्ययनले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति २८ पुष २०७६, सोमबार ०५:२१